LA OGAADAY: Dalab Ay Real Madrid Ka Gudbisay Mohamed Salah
Bilo kooban ka hor intii aanay Real Madrid iyo Liverpool iskugu soo bixin finalkii Champions League ee Kiev lagu qabtay sannadkii 2018, waxa jiray dalab saarnaa miiska Reds iyo midka wakiilka Mohamed Salah.
Dalabkan oo ay taageereyaasha labada kooxood ka war-hayeen, waxa isbeddel ku yimid markii ay labada kooxood iskugu yimaaddeen finalka ee ay Real Madrid ay koobka ku guuleysatay, isla markaana uu Sergio Ramos garabka midig ka jabiyey Mohamed Salah.
Tababare Zinedine Zidane ayaa rajaynayay in uu war fiican ka heli doono Mohamed Salah oo uu ogolaan doono, kooxdiisana ku cadaadin doono in laga iibiyo Real Madrid oo waqtigaas haysatay laba koob oo Champions League oo xidhiidh ah iyo midka ay ku ballansanaayeen ee markii dambe ay ku saddaxaysatay Los Blancos.
Sida uu sheegay tababare ku-xigeenkii hore ee xulka qaranka Masar ee Hany Ramzy, Mohamed Salah ayaa si cad u diiday dalabka ay Real Madrid u gudbisay si uu Liverpool ula sii joogo sannadkaas, laakiin Real Madrid oo kaliya may ahayn ee waxa iyaduna doonaysay Barcelona.
Xili ciyaareedkaas oo uu Mohamed Salah dhaliyey goolal badan, waxa uu Hany Ramzy oo ka hoos shaqaynayay Hector Cuper waxa uu ka war-qabay arrimaha Salah, waxaanu yidhi isaga oo arrintan ka hadlaya: “Markii aan la shaqaynayay Hector Cuper, waxa aanu tababar ku qaadanaynay Switzerland bishii March 2018.
“Waxaan la hadlayay Salah waxaanu ii sheegay in Real Madrid ay usoo dirtay dalab.
“Dhab ahaantii dalabku wuxuu ahaa mid wanaagsan, laakiin Salah waxa uu nala tashaday aniga iyo Mr Cuper, waxaanu go’aansaday inuu sii joogo Liverpool sababtoo wuu ku faraxsanaa halkaas.”
Markii uu talooyinka Hector Cuper iyo ku-xigeenkiisa uu taladooda helay, waxa uu Mohamed Salah go’aansaday inuu sii joogo Anfield, kuna wargeliyo wakiilkiisa in aanu doonaynin inuu Real Madrid u wareego, kaas oo isaguna go’aanka gaadhsiiyey Los Blancos.